Nezvedu - Guangzhou Asiaprint Industrial Co, Ltd.
Yakagadzwa muna 2016, Guangzhou Asiaprint Industrial Co, Ltd. yave ichive iye mutungamiriri we heat heat sublimation technology. Isu tinopa kupisa muchina wekuchinjisa muchina, sublimation wekudhinda muchina, DTF yekudhinda muchina, fusing muchina, embossing muchina, dryer, sublimation bepa, inki nezvimwe zvinowanikwa muGuangzhou, China, tinoita zvemhando yepamusoro kudzora uye kuyedza pano tisati tatumira kuve nechokwadi chekuti zvigadzirwa zvedu zvinosangana. izvo zvinodiwa nevatengi vedu.
Isu tinonzwisisa iyo yakazara sevhisi yakakosha kwazvo. Zano rinopihwa mutengi kuti amubatsire iye kusarudza chaiyo michina mubhajeti. Rutsigiro rwehunyanzvi pa-line runogona kupihwa munguva uye vashandi vanozofara chaizvo kukubatsira. Mainjiniya anowanikwa ekushandira michina mhiri kwemakungwa. Isu tinozivikanwa kuna CE.
Tinobvuma madhizaini madiki, OEM neODM odha. Yakasarudzika kupisa michina yekudhinda ichave inofara kuve yakagadzirirwa nevane ruzivo mainjiniya.
Tinotarisira kunzwa kubva kwauri!
Guangzhou Asiaprint Industrial Co, Ltd. yakanangana nemuchina wekudhinda wekupisa, muchina wekuchinjisa kupisa, roll kumonera kupisa muchina, sublimation muchina, hombe fomati kupisa muchina muchina, fusing muchina wemberi machira. Tiine makore anodarika 19+ ekuziva isu tinogadzira, kugadzira, kuisa nekuchengetedza michina yekuvandudza indasitiri. Isu tinogadzira michina yekupisa yekupisa uye yakazara mitsara yekugadzira.
Asiaprint yekupisa yekudhinda makarenda anowanikwa aine akasiyana madhiramu saizi uye akasiyana anoshanda ekukura, zvichienderana nechishandiso. Machina uye mitsara inogona kununurwa yakamira kana yakakwana tsika yakaitwa.
Iyi yakakura yakakura yedu yekupisa yekudhinda michina yakagadzirirwa kupfuurira kudhinda kwefashoni, kuendesa machira, asiri-rakarukwa, Sport kusakara, Jersey, mabhegi, kapeti mbeva mapedhi uye girazi etc.
Yedu yese yekupisa yekudhinda muchina ine Europe Standard CE chitupa, SGS chirevo.
Tine Assemble Report kubva kuAlibaba, uye tibvumidzwe seYakaongororwa Mutengesi.
Kwemakumi emakore, tinotenda kune mumwe nemumwe mutengesi kana muparidzi munyika, tine zvipfupiso zvigadzirwa zvinozivikanwa mune mumwe musika kana imwe nyika. North America, South America, Asia, Mid kumabvazuva nzvimbo vatengesi vanogona kuwanikwa mune imwe nyika, senge, USA, Mexico, Thailand, Iran.
Yakabatsirwa kubva kufekitori yedu OEM sevhisi, vatengi vazhinji vanogadzira uye vanoteedzera yavo dhizaini maitiro. Ndokureva kuti, isu nemugadziri wedu takasungirwa nemaitiro azvino ekugadzira uye tinosimudzira mazano edu ekugadzira kuti tibuditse izvo zvinoenderana nemhando yakakodzera munyika yega yega.
Tinotarisira kusangana nevatengi vedu uye nekunzwa mazano nezvenzira dzatingaramba tichivandudza zvigadzirwa zvedu kuti tiite vatengi vedu kuita zvirinani.
Isu tinochengeta iyo pfungwa kumberi mupfungwa dzedu kubva pakutanga kwekugadzirwa kwechigadzirwa kuburikidza nekuendesa uye chero bedzi icho chigadzirwa chiri kupa sevhisi kumutengi wedu.
Izwi rako rinokosha! Mhinduro yako yakakosha!
Isu tiri boka revanhu vane maitiro akazara kubva kwauri anotenga kuti ushandise. Unogona kuvimbiswa kuti kuzvipira kwedu hakusi kwekutengesa zvigadzirwa chete asi kuisa zvishandiso, kudzidzisa vashandi uye kuramba uchidzidzisa vatengi vedu pasirese.
Waranti yedu inosanganisira gore rimwe pane zvese zvikamu.